Mushambadope Lands Liquid Top Job. - TechnoMag
Liquid Telecom has appointed Martin Mushambadope as the company’s deputy managing director with effect from March 1, 2018.
In a statement, the company said Mushambadope who deputises Liquid managing director Wellington Makamure, will oversee Liquid Zimbabwe operations.
“The Liquid Telecom Zimbabwe Board, the Managing Director of Liquid Telecom Zimbabwe and Group Executive Southern Africa, Mr. Wellington Makamure are pleased to announce the appointment of Martin Mushambadope as the Deputy Managing Director for Liquid Telecom Zimbabwe effective 1 March 2018.
“In his new role, Martin is responsible for Liquid Telecom Zimbabwe operations,” he said.
Martin has extensive local and International experience in the Financial Services sector, Healthcare Services, Advisory Services and Telecoms having worked in the UK, Singapore, Ghana, Kenya and Zimbabwe.
Mushambadope holds a Bachelor of Business Studies Degree and MBA with UZ as well as a Certificate in Telecoms with UK Telecoms Academy.
Zim Seeks Canada’s e-Govt Expertise